Abakhiqizi Bezindaba Zezimboni - Abahlinzeki Bezindaba BaseChina Nezimboni
I-RFID iphelelisa ukulandelwa kokudla ukuhlinzeka ngesiqinisekiso sokwakhiwa kwempilo yabantu
Eqinisweni, ezimpilweni zethu zansuku zonke, izindaba ezimayelana nokuphepha kokudla zihlala ezindlebeni zethu. Ezimweni ezivezwe eMcimbini wabathengi ngoMashi 15 minyaka yonke, ukuphepha kokudla kuhlale kuyisici sokukhathazeka. Kunezinkinga ezingapheli mayelana nokuphepha kokudla, kanye nokuqondisa okuhambisanayo ...
Ubuchwepheshe obuphezulu bokulwa nomgunyathi emkhakheni we-Intanethi Yezinto
Ubuchwepheshe bokulwa nomgunyathi emphakathini wanamuhla sebufinyelele ebangeni elisha. Lapho kunzima kakhulu ukuthi abenzi bomgunyathi benze okuthe xaxa, kuba lula kakhudlwana ukuthi abathengi babambe iqhaza, futhi nobuchwepheshe obuphikisana nomgunyathi buya ngokuya buba bukhulu, kube ngcono umphumela wokulwa nomgunyathi. Kuyinto ...
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-RFID emkhakheni wokuphathwa kwezingxenye zezimoto
Ukuqoqwa nokuphathwa kolwazi lwezingxenye zezimoto olususelwa kubuchwepheshe beRFID kuyindlela yokuphatha esheshayo nephumelelayo. Ihlanganisa amathegi we-RFID e-elekthronikhi ekuphathweni kwendabuko yokugcina izingxenye zezimoto futhi ithola imininingwane yezingxenye zemoto ngamaqoqo kusuka kude ukuze kuzuzwe ...
Izinhlelo ezimbili zokuhlunga ezenzelwe i-RFID: i-DPS ne-DAS
Ngokwanda okukhulu komthamo wezimpahla womphakathi wonke, umthwalo wokuhlunga uya ngokuya usinda futhi usinda. Ngakho-ke, izinkampani eziningi ngokwengeziwe zethula izindlela ezithuthuke kakhulu zokuhlunga ezidijithali. Kule nqubo, indima yobuchwepheshe be-RFID nayo iyakhula. Kuningi ...
I "chip yezenhlalo" ye-NFC yaduma
E-livehouse, emigqeni ephilayo, abantu abasha abasadingi ukufaka iWhatsApp ngezinyathelo eziningi. Muva nje, "isitika senhlalo" sesithandwa. Abantu abasha abangakaze bahlangane endaweni yokudansa bangangeza ngqo abangani ekhasini eliyisiqalo lezenhlalo ngokumane bakhiphe omakhalekhukhwini ...
Ukubaluleka kwe-RFID esimweni sezinto zomhlaba wonke
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwezinga lokuhwebelana kwembulunga yonke, ukushintshisana ngamabhizinisi emhlabeni wonke nakho kuyanda, futhi izimpahla eziningi ngokwengeziwe zidinga ukusatshalaliswa emingceleni. Indima yobuchwepheshe beRFID ekusakazweni kwempahla nayo iya ngokuya igqama. Noma kunjalo, imvamisa r ...
Imakethe yokufunda ye-RFID: izitayela zakamuva, izibuyekezo zobuchwepheshe kanye namasu okukhula kwebhizinisi
"I-RFID Reader Market: Izincomo Zamasu, Amathrendi, Ukuhlukaniswa, Sebenzisa Ukuhlaziywa Kwamacala, I-Competitive Intelligence, Ukubikezela Kwezwe Lomhlaba kanye Nezifunda (kuya ku-2026)" Umbiko wocwaningo uhlinzeka ngokuhlaziywa kanye nokubikezela kwemakethe yomhlaba, kufaka phakathi izindlela zentuthuko ngesifunda, Okuncintisanayo ku .. .